Ikwadoor - Wikipedia
Equateur waa wadan ku yaalo Koonfur Ameerika dhinaca Badweynta Baasifik.
Ecuador (Isbaanishaani waxay dhageystaan ​​codadkaan) EK-wy-dor, Isbaanish: [Ikwadur], si rasmi ah Jamhuuriyadda Ecuador (Isbaanish: República del Ecuador, oo macnaheedu yahay "Jamhuuriyadda Isku-dheellitirka "Quechua: Ikwadur Ripuwlika), waa Jamhuuriyad dimoqraadi ah oo ku taal Waqooyiga Ameerika ee waqooyiga Ameerika, oo xuduud u leh Colombia oo ku taal woqooyiga, Peru oo ku taal bariga iyo koonfurta, iyo Badweynta Badda ee Galbeedka. Ecuador sidoo kale waxaa ka mid ah Galápagos Islands Pacific, qiyaastii 1000 kilomitir (620 mi) galbeed ee dhulgariirka. Magaalada caasimadda waa Quito, halka magaalada ugu weyn waa Guayaquil.
Hadda waxa Ecuador u joogay qolal kala duwan oo Amerindian ah oo si tartiib ah loogu dhex galay Boqortooyada Inca inta lagu jiray qarnigii 15aad. Xuduudaha ayaa Spain ka qarxiyay qarnigii 16aad, iyadoo xor ka aheyd 1820-kii oo ka mid ahayd Gran Colombia, taas oo ka soo baxday dawlad madax banaan 1830-kii. Dhaqan ahaan labada boqortooyadu waxay ka muuqataa dadka reer Ekwador ee dadyowga kala duwan, iyada oo inta badan 16.4 malyan oo qof oo ah qowmiyado, oo ay ku xigto tiro yar oo ka mid ah dadka laga tirada badan yahay ee Yurub, Amerindian, iyo Afrikaanka. Isbaanishku waa luqadda rasmiga ah waxayna ku hadlaan dadka intiisa badan, inkastoo 13 luuqadaha Amerindian lagu aqoonsado, oo ay ku jiraan Quichua iyo Shuar.
Ecuador waa dal dhexdhexaad ah, oo leh dhaqaale horumarineed oo aad ugu tiirsan badeecadaha, sida shidaalka iyo waxyaabaha beeraha. Waxaa lagu maamulaa Jamhuuriyad madaxbanaan. Mid ka mid ah 17ka dal ee dunida oo adduunka ah, Ecuador waxay martigalisaa dhirta iyo xayawaan badan, sida kuwa ku yaalla jasiiradaha Galápagos. Aqoonsiga hiddaha khayraadka ee gaarka ah, dastuurka cusub ee 2008 waa kan ugu horreeya aduunka si uu u aqoonsado Xuquuqda Dabeecadda, ama xuquuqda deegaanka.
Dhulgariir ka dhacay Ikwadoor
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Ikwadoor&oldid=227125"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 25 Diseembar 2021, marka ee eheed 21:15.